Umuthi we-Atorvastatin-Teva: imiyalo, ukuphikisana, i-analogues > Imithi
I-Atorvastatin-Teva: Imiyalo yokusebenzisa, ama-analogues, izixwayiso, ukubukeza
I-Atorvastatin-Teva yakhiqizwa ngendlela yamathebulethi afakwe ngokuhlanganiswa kwefilimu: Imidwebo enjenge-capsule, ecishe ibe mhlophe noma imhlophe, kuqoshwe u-"93" ngakolunye uhlangothi, nokuqoshwe ngomthamo ngakolunye uhlangothi: "7310" for 10 mg, no 7310 for 20 mg "7311", for 40 mg - "7312", for 80 mg - "7313" (ama-pcs ayi-10. Emabhulini, ebhokisini lekhadibhodi elingu-3 noma ku-9).
Ithebhulethi yokuqamba 1
into esebenzayo: i-atorvastatin calcium - 10.36, 20.72, 41.44 noma 82.88 mg, okulingana no-10, 20, 40 noma 80 mg we-atorvastatin,
izakhi ezengeziwe: i-povidone, i-lactose monohydrate, i-eudragit (E100) (methyl methacrylate, butyl methacrylate kanye ne-dimethylaminoethyl methacrylate Copolymer), i-sodium stearyl fumarate, i-croscarmellose sodium, i-alpha-tocopherol macrogol.
umdwebo wefilimu: opadry YS-1R-7003 hypromellose 2910 3cP (E464), polysorbate 80, hypromellose 2910 5cP (E464), macrogol 400, titanium dioxide.
i-heterozygous yomndeni kanye ne-hypercholesterolemia ye-heterozygous, i-hypercholesterolemia eyinhloko, ixubekile (ihlanganiswe) i-hyperlipidemia (izinhlobo IIa ne-IIb ngokuya ngezigaba zikaFredrickson) - ngokuhambisana nokudla okunciphayo kwe-lipid okwenzelwe ukwehlisa amazinga aphezulu we-cholesterol, i-low-density lipoprotein cholesterol kanye nokwanda kwe-high-density lipoprotein cholesterol (HDL),
i-homozygous womndeni hypercholesterolemia - ukuze kuncishiswe i-cholesterol ephelele ne-LDL cholesterol, ngempumelelo enganele yokwelashwa kokudla nezinye izindlela zokwelapha ezingezona ezokwelapha,
i-serum triglycerides ephakeme (uhlobo IV ngokusho kwesigaba seFredrickson) i-dysbetalipoproteinemia (uhlobo lwe-III ngokuhlukaniswa kukaFredrickson) - uma kwenzeka kungasebenzi kahle ukwelashwa kokudla.
iminyaka yobudala engafika kwengu-18 (iphrofayili yokuphepha kwe-atorvastatin ezinganeni nakwentsha ayifundwanga),
izifo zesibindi ezisebenzayo, ukwanda komsebenzi wama-enzyme wesibindi wemvelo engaziwa, edlula umkhawulo ophezulu wejwayelekile (VGN) izikhathi ezingaphezu kwezingu-3,
ukwehluleka kwesibindi (amakilasi e-Child-Pugh A no-B),
Isihlobo (kuyadingeka ukusebenzisa umkhiqizo ngokuqapha):
izinkinga ze-endocrine nezemetabolic,
umlando wesifo sesibindi,
isifo sokuwa esingalawulwa,
ukutheleleka okunzima kakhulu (kufaka phakathi i-sepsis),
ukulimala, ukuhlinzwa okukhulu,
I-Atorvastatin-Teva isetshenziswa ngomlomo, isikhathi esingu-1 ngosuku. Ukudla akukuphazamisi ukusebenza komuthi.
Umthamo wokuqala, njengomthetho, ngu-10 mg, amaphilisi athathwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Imithamo ikhethwa udokotela ngokwahlukana, kuye ngezinga lokuqala le-cholesterol, inhloso yokwelashwa kanye nokuphendula kwesiguli ekwelashweni. Umthamo wansuku zonke ungahluka kusuka ku-10 kuye ku-80 mg, kufanele ulungiswe ngezikhathi ezithile zamaviki ama-4 noma ngaphezulu. Umthamo omkhulu wansuku zonke akufanele udlule i-80 mg.
Ngesikhathi sokwelashwa, ngokwanda komthamo, kuyadingeka njalo emavikini ama 2-5 ukubheka amazinga we-lipid we-plasma futhi, ngokuya ngemininingwane etholakele, lungisa umthamo.
i-homozygous yomndeni hypercholesterolemia: 80 mg ngosuku,
heterozygous womndeni hypercholesterolemia: ekuqaleni kwenkambo, thatha i-10 mg ngosuku, ngesikhathi sokwelashwa njalo emavikini ama-4 umthamo ukhuphuka, uletha ku-40 mg ngosuku, otholakala ngokuhambisana nokulandelana kwe-bile acid, lapho usebenzisa i-atorvastatin njengomuthi we-monotherapy, umthamo ungandiswa kuze kufike ezingeni eliphakeme amanani - 80 mg ngosuku,
i-hypercholesterolemia eyisisekelo ne-hyperlipidemia exubekile: thatha i-10 mg ngosuku, lo muthi ezigulini eziningi ukuvumela ukuthi unikeze ukulawulwa okudingekayo kwamazinga we-lipid, njengomthetho, umphumela wokwelapha obalulekile ubonwa emavikini ama-4 ngemuva kokuqala kokuphatha futhi uhlala isikhathi eside usebenzisa umuthi.
Lapho kukhona ukwehluleka kwesibindi, uma kunesidingo, umthamo we-Atorvastatin-Teva ungancishiswa noma ukwamukelwa kwawo kungakhanselwa. Ezigulini ezinesifo sezinso, ukulungiswa komthamo akudingeki.
Ngokwesifo senhliziyo esitholakele noma ingozi enkulu yezinkinga zenhliziyo, kunconywa ukuthi ukwelashwa kwenziwe ngalezi zinhloso ezilandelayo zokulungiswa kwezinga le-lipid: Inani eliphelele le-cholesterol Ukukala le ndatshana:
Ngokolwazi olunikezwe yi-radar, i-Atorvastatin Teva imele izidakamizwa eziliqembu lama-statins. Umuthi unomphumela oqondile ekunciphisweni kwe-enzyme, okuyi-inhibitor. Umuthi uyatholakala ngesimo sethebulethi, uhlanganiswe negobolondo kusuka kwifilimu ekhethekile, enikeza umkhiqizo umbala omhlophe.
Kuyasebenza isakhi esisebenzayo I-Atorvastatin Teva - I-Atorvastatin calcium calcium. Ngokuya kokuxakaniseka kwento esebenzayo, amaphilisi anomthamo ka-21.7 noma we-10.85 mg. Uma udlulela ku-atorvastatin ngu-20 no-10 mg, ngokulandelana.
Ngaphezu kwento esemqoka eyenza umsebenzi wokuphilisa, ithebhulethi ngayinye iqukethe inani elithile lezinto ezisizayo. Lokhu kufaka: i-calcium carbonate, udayi opadray, i-magnesium stearate, cellulose, isitashi. Umenzi ufaka umuthi emabhokisini e-blister kanye nasemabhokisini amakhadibhodi.
Iningi leziguli ezelashwa ngale ndlela ehlanganiswe nokufakwa kwe-Atorvastatin-Teva, lithe ukubekezelela kwayo okuhle. Ngaphandle kwalokhu, njenganoma yikuphi okunye, lesi sidakamizwa sinemiphumela emibi ethile. Ngu umgudu wokugaya ukudla ukukhubazeka kwe-dyspeptic (isifo sohudo noma ukuqunjelwa, ukushisa kwenhliziyo, isicanucanu, ukuhlanza, ukubopha), ukuvela kwesilonda emathunjini kanye namathumbu, izifo zokuvuvukala zamanyikwe, isisu kungenzeka.
Ngu ukunyakaza kwezitho zomzimba kungahlakulela i-myositis, i-myalgia, i-arthralgia, i-myopathy, i-rhabdomyolysis. I-atorvastatin-indased myopathy ingaba yinkimbinkimbi ngokuhluleka kwe-renal ngenxa ye-myoglobinuria (ukumbiwa kwemikhiqizo yokubola kwemisipha ethambile emchameni).
Akuvamile ukuthi isidakamizwa sibangele ukubonakaliswa komzimba (i-urticaria, i-edema ye-Quincke's, i-dermatitis, izilonda zesikhumba ze-erythematous).
Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthikamezeka kwengqondo, ukwengezelelwa komzimba, ukulala okungaphazamiseki nokuvuka, ukuphazamiseka okubukwayo noma kokuzwa kokuqonda.
Ngaphambi kokuqala ukuthatha i-Atorvastatin Teva, ngaphandle kokukhetha, zonke iziguli zidinga ukudla okujwayelekile kwe-hypocholesterol. Lo mgomo wokudla okufanele ubhekwe hhayi kuphela ngokumelene nesizinda sokulashwa kwezidakamizwa, kodwa futhi kukho konke impilo. Le ndlela izosiza ukufeza inhloso esemqoka yokwelapha - i-LDL ne-cholesterol ephelele izofinyelela amanani ajwayelekile, futhi izinga le-HDL lizokwanda.
I-Atorvastatin Teva ingathathwa ngokungakhathalekile isikhathi sokudla. Ukuqala ukwelashwa, udinga ukuqapha iphrofayili ye-lipid inyanga nenyanga ukuze ukhethe bese ulungisa umthamo womuthi.
Imithamo yokuqalisa imvamisa ayidluli i-10 mg ye-atorvastatin ngosuku. Uma kunesidingo, kungenzeka ukuletha umthamo omkhulu we-80 mg ngosuku, ohlukaniswe ngemithamo emi-2 (ekuseni nakusihlwa). Uma isiguli siphathwa ngasikhathi sinye ngama-cyclosporiomas, umthamo wansuku zonke we-Atorvastatin Teva kufanele ube omncane (10 mg ngosuku). Ukwanda kokuhlushwa kwe-atorvastatin ku-plasma yegazi (ngokuhambisana nezinguquko ezinhle kwikhwalithi yokujikeleza kwe-lipid) kuqashelwa ezinsukwini eziyi-10-14 ngemuva kokuqala kokwelashwa.
Ukukhulelwa yisimo somzimba wesifazane lapho i-Atorvastatin Teva iphikiswa ngokuphelele. Ukusetshenziswa kwesidakamizwa kungenzeka kuphela lapho inzuzo kumama ibeka engcupheni indlalifa engakazalwa. Ngenxa yokuntuleka kwedatha yokucwaninga emtholampilo yokuthi ngabe i-Atorvastatin Teva ingena kubisi lwebele, kwenqatshelwe ukuyithatha lapho isondliwa ngokwemvelo. Uma ukwelashwa nge-atorvastatin kudingekile, ukuqunjelwa kufanele kuyekwe.
Uma ummeleli wobulili obufanele efunde ngokukhulelwa kwakhe, esevele eseqalile ukwelashwa ne-Atorvastatin Teva, ukuvuma kwakhe kufanele kumiswe ngokushesha. Amantombazane athatha lo muthi kufanele anakekele izindlela ezinokwethenjelwa zokuvikela ukumelana nokukhulelwa kwengane. Abesifazane besikhathi sokuzala, ngaphambi kokuqala ukwelashwa ne-Atorvastatin Teva, kungakuhle ukuthi uthole ukubonisana nodokotela we-gynecologist.
Ukusetshenziswa kwe-Atorvastatin Teva akunconyelwanga ngokwengxenye yeqembu labantu abangaphansi kweminyaka yobuningi. Lokhu kungenxa yokuthi izivivinyo zemitholampilo mayelana nokusebenza ngempumelelo nokuphepha kwezidakamizwa ezinganeni azenziwanga, ngakho-ke imininingwane kulokhu ayitholakali.
Ukuze ungafaki imiphumela engathandeki emzimbeni, kufanele wazi ukuthi i-Atorvastatin Teva ixhumana kanjani nezinye izidakamizwa. Ngokusetshenziswa ngasikhathi sinye nezidakamizwa ngaphakathi eziqukethe i-norethisterone ne-ethinyl estradiol (izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo), ukuhlangana kwe-plasma kwalezi zinto ezisebenzayo ze-hormone kukhula kakhulu. Le nto kufanele icatshangwe lapho kunqunywa ukukhulelwa kwe-hormonal kwabesifazane abadinga ukwelashwa nge-Atorvastatin Teva.
Ukusebenzisana okungathandeki ne-atorvastatin namanye ama-statins kubonakala ku-cyclosporine, izidakamizwa ze-antimycotic, amanye ama-antibacterial agents eqenjini le-macrolide, ne-nicotinic acid. Ukusetshenziswa okuhlangana nalezi zinto kuyandisa kakhulu ingozi ye-myopathy ngazo zonke izinkinga ezilandelayo (i-rhabdomyolysis, ukwehluleka kwe-renal).
Ngokuphathwa kanyekanye kwe-Atorvastatin Teva nge-digoxin, ukugcwala kwe-glycoside yenhliziyo ku-plasma yegazi kukhuphuke kuphela lapho umthamo wansuku zonke we-statin wawungu-80 mg. Ngakho-ke, ezigulini ezithola i-digoxin, ukuze kugwenywe ukudakwa kwe-glycoside, umthamo womenzeli wokuncipha we-lipid kufanele ube ngaphansi kwama-80 mg ngosuku.
Lapho uthenga i-Atorvastatin Teva, intengo incike kumthamo wento esebenzayo, kanye nenethiwekhi yamakhemisi lapho kuhlelwa khona ukuthengwa kwalo muthi. Umgomo wamanani walesi sidakamizwa awufani kakhulu nezindleko zezidakamizwa ezifanayo ngomgomo wezenzo zawo.
Ensimini I-Russian Federation Intengo ephakathi nepakethe ngalinye le-Atorvastatin Teva ngama-ruble angama-200.
Isi-Ukraine ekhemisi linikeza amaphilisi angama-20 mg ngentengo ka-250 UAH.
Izinkampani zesimanje zemithi zinikela ngokuthenga ama-Atorvastatin Teva analogues womkhiqizo wasekhaya nowangaphandle. Le mishanguzo ihluke ngamagama okuhweba kuphela, kodwa ngokuya ngezinto ezisebenzayo ziyefana. Ama-analogues ajwayelekile kakhulu e-Atorvastatin Teva yi-Atoris, Liprimar, Tulip, Torvakard, Atomax.
Ukubuyekezwa okuningi kwalesi sidakamizwa, okwabiwa ngaso odokotela neziguli, kuyakhanya. Abantu abathathe i-Atorvastatin Teva baphawula ukubekezelela kwayo okuhle, umphumela osheshayo, obonakala ngobude besikhathi, kanye nentuthuko esimweni esejwayelekile. Odokotela ababheka iziguli ezelashwa i-Atorvastatin Teva, bakhuluma ngomphumela wazo omuhle wokulashwa, okuqinisekiswa yimiphumela yezindlela ezahlukahlukene zokucwaninga.
I-Atorvastatin Teva iyisidakamizwa esinciphisa i-lipid esenzelwe ukuguqula umzimba we-lipid emzimbeni womuntu, ngaleyo ndlela sivikele emiphumeleni eyingozi ye-cholesterol emikhunjini yezitho ezibalulekile. Kodwa-ke, iziguli kufanele zikhumbule ukuthi i-Atorvastatin Teva ngokuyinhloko ingumuthi, ukwamukelwa kwayo okufanele kuvunyelwane nodokotela ngemuva kokuhlolwa ngokuphelele!
Amathebhulethi Ahlanganisiwe, i-10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg
into esebenzayo - i-atorvastatin calcium trihydrate engu-10.3625 mg, 20.725 mg, 31.0875 mg, 41.450 mg, 62.175 mg, 82.900 mg, okulingana ne-atorvastatin 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg 80 mg,
izithasiselo: i-microcrystalline cellulose (GR M102), i-sodium carbonate, i-maltose, i-sodium ye-croscarmellose, i-magnesium stearate,
ukwakhiwa kwamafilimu: i-hypromellose (Pharmacoat Gr.606), i-hydroxypropyl cellulose, i-triethyl citrate, i-polysorbate 80, i-titanium dioxide (E 171).
Amacwecwe ahlanganiswe negobolondo ukusuka kokumhlophe kuya kokucishe kube mhlophe, okusaqanda, nangaphezulu biconvex (ngemithamo ye-10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg).
Amacwecwe ahlanganiswe negobolondo ukusuka kokumhlophe kuya kokucishe kube mhlophe, okusaqanda, nangaphezulu biconvex kanye nokumaka "30" ngakolunye uhlangothi (ukuthola umthamo ka-30 mg).
Amacwecwe ahlanganiswe negobolondo ukusuka kokumhlophe kuya kokucishe kube mhlophe, okusaqanda, nangaphezulu biconvex kanye nokumaka "60" ngakolunye uhlangothi (ukuthola umthamo ka-60 mg).
Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, i-atorvastatin idonswa ngokushesha. Ukuhlushwa okuphezulu kutholakala ngemuva kwamahora we-1-2. Ukuncipha kukhuphuka ngokulingana nomthamo. Ngenxa yokucaciswa kokuqothuka kwesimo se-mucous membrane ye-emathunjini esiswini kanye nomphumela we "ndima yokuqala" yesibindi, ukungagculiseki ngokuphelele kwe-atorvastatin kungu-12%, kanti uhlelo lwe-bioavailability olungama-30%. Umthamo omaphakathi wokusatshalaliswa kwe-atorvastatin cishe amalitha angama-381. Ukuhlanganisa amaprotheni e-plasma - 98%. I-Atorvastatin isetshenziswa ngamandla yi-cytochrome P450 ngokwakhiwa kwe-ortho- ne-para-hydroxylated derivatives kanye nemikhiqizo ehlukahlukene ye-beta oxidation. Umsebenzi we-inhibitory ophikisana nokuhlehliswa kwe-HMG-CoA ku-plasma cishe u-70% ngenxa yama-metabolites asebenzayo. I-Atorvastatin kanye nama-metabolites ayo akhululwa ikakhulu nge-bile ngemuva kwe-hepatic and extrahepatic metabolism. Ukuphila kwesigamu se-atorvastatin kungamahora ayi-14. Isigamu sempilo yomsebenzi we-inhibitory we-HMG-CoA reductase amahora angama-20-30 ngenxa yama-metabolites asebenzayo.
Ezigulini esezikhulile, inani lama-atorvastatin ku-plasma liphezulu.
Uma kwenzeka ukungasebenzi kahle kwesibindi, ukuqoqwa kwe-atorvastatin nama-metabolites ayo kukhuphuka ngezikhathi eziyi-16.
Indlela yokwenza isebenza ihlotshaniswa nokwephulwa kokuhlanganiswa kwe-cholesterol esibindini esiteji se-mevalonic acid ngenxa yokuvinjwa kokukhetha ukuncintisana kwe-HMG-CoA reductase. I-Atorvastatin inciphisa amazinga e-cholesterol e-plasma ne-lipoprotein ngenxa yokulimala kwe-hepatic cholesterol kanye nokwanda kwesibalo nomsebenzi we-hepatic low density lipoprotein receptors (LDL) on the cell surface, okuholela ekukhuleni okukhulu futhi ukubusa kwe-LDL. I-Atorvastatin iyasebenza ekwehliseni amazinga e-LDL ezigulini ezine-homozygous hereditary hypercholesterolemia ovame ukungaphenduli ekwelapheni okwehlisa i-lipid. Ukwehla kwamazinga we-LDL kunciphisa ingozi yokudlanga kwesifo senhliziyo.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa, kufanele uzame ukufeza ukulawula kwe-hypercholesterolemia ngokudla, ukuvivinya umzimba kanye nokunciphisa umzimba ezigulini ezinokukhuluphala, kanye nokwelashwa kwezifo ezingaphansi.Lapho unquma umuthi, isiguli kufanele sincome ukudla okujwayelekile kwe-hypocholesterolemic, okumele ikulandele ngesikhathi sokwelashwa.
Umuthi uphuzwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku, noma ngabe kudla kangakanani. Umthamo wesidakamizwa uqokwa kusuka ku-10 kuye ku-80 mg kanye ngosuku, kucatshangelwa okuqukethwe kokuqala kwe-LDL-C, inhloso yokwelashwa kanye nomphumela ngamunye. Ekuqaleni kokwelashwa kanye / noma ngesikhathi sokwanda komthamo womuthi, kubalulekile ukuqapha okuqukethwe kwe-lipidma lipid njalo emavikini angama-2-2 futhi ulungise umthamo uma kunesidingo.
I-hypercholesterolemia eyisisekelo ne-hyperlipidemia ehlangene (yezifo): yeziguli eziningi - i-10 mg kanye ngosuku, umphumela wokwelapha uzibonakalisa phakathi kwamasonto ama-2 futhi uvame ukufinyelela esikalini kungakapheli amasonto ama-4, ukwelashwa okuqhubeka isikhathi eside, umphumela uyaqhubeka.
I-Homozygous womndeni hypercholesterolemia: 80 mg kanye ngosuku (ezimweni eziningi, ukwelashwa kuholele ekunciphiseni kokuqukethwe kwe-LDL-C ngo-18-45%).
I-dyslipidemia enzima: umthamo wokuqala onconywayo ngu-10 mg kanye ngosuku. Umthamo ungangezelelwa ube ngu-80 mg ngosuku ngokuya nempendulo yomtholampilo nokubekezelelana. Imithamo kufanele ikhethwe ngokulandelana icabangele inhloso yokuncoma yokwelashwa.
Sebenzisa ezigulini ezinezifo zesibindi: bona. "Contraindication."
Umthamo ezigulini ezihluleka yizinso: isifo sezinso asithinti ukuhlushwa kwe-Atorvastatin-Teva ku-plasma noma isilinganiso sokwehla kokuqukethwe kwe-LDL-C, ngakho-ke, ukulungiswa komthamo komuthi akudingeki.
Ukusebenza kubantu asebekhulile: akukho mehluko ekuphepheni, ukusebenza ngempumelelo, noma ukufeza izinhloso zokwelashwa kwe-lipid-okwehlisa kubantu asebekhulile uma kuqhathaniswa neningi labantu.
I-Atorvastatin-Teva - ithuluzi lesimanje lokwehlisa i-cholesterol
I-Atorvastatin-Teva ingumuthi osiza iziguli ezine-cholesterol ephezulu enama-plaque deposits emikhunjini yazo. Ukubuyekezwa kodokotela bathi lesi yisizukulwane esisha somuthi, esuselwa ku-synthetically.
Ungayithatha kanjani umuthi we-cholesterol ka-Atorvastatin-Teva?
Umuthi ungoweqembu lama-statin, kepha ukhombisa ukusebenza kahle okuphezulu kunemithi efanayo.
Isici se-Atorvastatin-Teva ngumkhawulo obalulekile ekuphatheni ngokubambisana nezinye izidakamizwa.
Imiyalo yokusebenzisa umuthi we-cholesterol uqukethe imininingwane mayelana nezinkomba nezici zesenzo. Umuthi ubekiwe ngendlela yamathebulethi, lapho i-cholesterol iqala ukusongela impilo yesiguli, ivuse ukuthuthukiswa kwezifo eziningi. Amathebhulethi e-Atorvastatin anikezwa uma kunezinkomba ezinjalo zokusetshenziswa:
Izifo zesistimu yezinhliziyo ezingadalwa yisiphetho sofuzo nokuhlobene nobudala, indlela yokuphila engafanele, ukuphuza utshwala nokubhema,
infaration myocardial kanye nesifo sohlangothi,
ukungena kabusha esibhedlela okubangelwa yi-angina pectoris,
i-hypercholesterolemia eyinhloko neyokuzalwa,
isidingo sokwengeza ukudla okuyisipesheli kokudla okubekelwe i-hyperlipidemia, dysbetalinoproteinemia, hypertriglyceridemia.
I-cholesterol kwezifo ezinjalo isongela umuntu, yandisa ingozi yokufa kungazelelwe kusuka ezinkingeni. Indlela yokusebenza yesidakamizwa ihlose ukuvimbela into efana ne-HMG-CoA reductase, ukuguqula isakhi sayo esiyinhloko i-3-hydroxy-3-methylglutarin-CoA ibe yi-mevalonic acid. Ngenxa yalokhu, ama-lipoproteins aphansi aqala ukwakha, okusiza ukunciphisa ingozi yokuthola izifo zenhliziyo, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, kanye nokunciphisa inani lokufakwa kwe-cholesterol ezindongeni zemithambo yegazi.
Imvamisa (> 1/100 kuya ku-˂1 / 10)
- Ubuhlungu ku-larynx ne-pharynx, i-nosebleeds
- ukuthopha, idyspepsia, isicanucanu, uhudo, ukuqunjelwa
- i-myalgia, i-arthralgia, izinhlungu emilenzeni, imisipha iminyene, ukuvuvukala kwamalunga, ubuhlungu emuva
-ukushintsha kwezinkomba zokusebenza kwesibindi, ukukhuphuka kwezinga le-creatine phosphokinase (CPK) egazini (izinga lokukhuphuka kwe-creatine phosphokinase ngaphezulu kwezikhathi ezi-3 ngaphezu komkhawulo ophezulu wesimo esijwayelekile) kwabonwa ku-2,5% weziguli ezithatha i-atorvastatin nezikhathi eziyi-10 eziphakeme kunomkhawulo ophezulu wesilinganiso 0.4% weziguli)
Kwesinye isikhathi (> 1/1000 kuya ku-˂1 / 100)
- amaphupho amabi, ukuqwasha
- isiyezi, i-paresthesia, i-hypesthesia, i-dysgeusia
- ukugabha, Ubuhlungu besisu, i-belching
- Ubuhlungu bentamo, ubuthakathaka bemisipha
- i-urticaria, ukuqubuka kwesikhumba, ukulunywa, i-alopecia
- i-malaise, i-asthenia, izinhlungu esifubeni, i-edema yangaphandle, ukukhathala, umkhuhlane
- umphumela omuhle ngokuba khona kwamaseli amhlophe egazi emchameni
- amazinga andayo wama-transaminases. Izinguquko ezincane, ezidlulayo futhi ezingadingi ukuphazamiseka kokwelashwa. Okubaluleke kakhulu ngokwezempilo (izikhathi ezi-3 eziphakeme kunomkhawulo ophezulu wejwayelekile) ukwanda kwama-serum transaminases kwabonwa ku-0.8% weziguli ezithola i-atorvastatin. Ukunyuka kwakuncike kumthamo futhi kuguqulwa kabusha kuzo zonke iziguli.
Akuvamile (> 1/10000 kuya ku-˂1 / 1000)
- I-edema ka-Quincke's, i-dermatitis eyi-bullous, iStevens-Johnson syndrome, i-necrolysis enobuthi, i-erythema multiforme
- i-myopathy, i-myositis, i-rhabdomyolysis, i-tendinopathy, ukuqhuma kwe-tendon
- ukwanda kwesisindo somzimba
Akuvamile kakhulu (> 1/10000 kuya ku-˂1 / 1000)
- ukukhohlwa, ukulahleka kwenkumbulo, i-amnesia, ukudideka
Lokhu kusabela okulandelayo kubikiwe, imvamisa yakho engazange isungulwe
- Isifo samaphaphu esijwayelekile (ngokwelashwa okuhlala isikhathi eside)
- i-mellitus yesifo sikashukela, imvamisa incike ebukhona noma ukungabikhona kwezici zobungozi (ukushesha kwe-glucose yegazi> 5.6 mmol / l, BMI> 30 kg / m2, triglycerides ephakeme, umlando we-hypertension)
- I-myopathy ye-Immuno-Mediated necrotizing
Umphumela wezidakamizwa ku-atorvastatin
I-Atorvastatin isetshenziswe ekubandakanyekeni kwe-cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) futhi iyisigcawu sokuhambisa amaprotheni, ngokwesibonelo, umgibeli we-hepatic absorption transporter OATP1B1. Ukusetshenziswa kanyekanye kwezidakamizwa okuyi-CYP3A4 inhibitors noma amaprotheni okuhambisa kungakhulisa ukugxilwa kwe-plasma kwe-atorvastatin futhi kwandise ingozi ye-myopathy. Ubungozi bungakhuphuka ngokusetshenziswa kanyekanye kwe-atorvastatin nezinye izidakamizwa ezingakhuthaza i-myopathy, ngokwesibonelo, okuphuma ku-fibroic acid ne-ezetimibe.
Ama-Inhibitors e-CYP 3A4 anamandla adumile aziwa ukuthi aholela ekwandeni okukhulu kokuhlushwa kwe-atorvastatin. Uma kungenzeka, ukusetshenziswa kanyekanye ne-CYP 3A4 inhibitors enamandla (i-cyclosporine, telithromycin ,cacithromycin, delavirdine, i-styripentol, i-ketoconazole, i-voriconazole, i-itraconazole, i-posaconazole kanye ne-HIV protease inhibitors, kufaka phakathi i-rivonavir. nabanye). Uma kungenakwenzeka ukugwema ukusetshenziswa kanyekanye kwalezi zidakamizwa nge-atorvastatin, kufanele ucabangele ukuthatha i-atorvastatin ngethamo elisezingeni eliphansi kakhulu, kanti futhi kunconywa nomtholampilo ofanele ngesimo sesiguli.
Ama-inhibitors aphakathi we-CYP 3A4 (isb., Erythromycin, i-diltiazem, i-verapamil ne-fluconazole) angakhulisa ukugxila kwe-plasma kwe-atorvastatin. Ukusetshenziswa kanyekanye kwe-erythromycin nama-statins kuhambisana nengozi eyandayo ye-myopathy. Izifundo zokusebenzelana kwezidakamizwa ukuhlola imiphumela ye-amiodarone noma i-verapamil ku-atorvastatin ayenziwanga. Kuyaziwa ukuthi i-amiodarone ne-verapamil zivimbela umsebenzi we-CYP 3A4, futhi, ngakho-ke, ukuphathwa kanyekanye kwalezi zidakamizwa nge-atorvastatin kungaholela kwimiphumela ekhuphukayo ye-atorvastatin. Ngakho-ke, ngokusetshenziswa kanyekanye kwe-atorvastatin kanye ne-CYP 3A4 inhibitors elinganiselayo, kungenzeka ukuthi kubhekwe imithamo ephansi kakhulu ye-atorvastatin, futhi kunconywe nokwelashwa kwesiguli. Ngemuva kokuqala ukwelashwa nge-inhibitor noma ngemuva kokushintsha umthamo wayo, kunconywa ukuqashwa okufanele komtholampilo.
Ijusi lamagilebhisi liqukethe isici esisodwa noma ngaphezulu esivimbela i-cytochrome CYP 3A4 futhi singakhuphula ukugxila kwe-plasma kwe-atorvstatin, ikakhulukazi ngokusetshenziswa ngokweqile kwejusi yamagilebhisi (> amalitha ayi-1,2 ngosuku).
Izinkomba ze-CYP 3A4
Ukuphathwa kanyekanye kwe-atorvastatin nge-cytochrome P450 3A4 inducers (ngokwesibonelo, nge-efavirenz, rifampicin, iSt John wort) kungaba nomthelela ekwehlekeni okungazinzi kokugxila kwe-plasma kwe-atorvastatin. Ngenxa yomshini wokusebenzisana okuphindwe kabili kwe-rifampicin (ukukhuthaza i-cytochrome P450 3A kanye nokuvinjwa kwe-hepatic transporter OATP1B1), ukuphathwa kanyekanye kwe-atorvastatin ne-rifampicin kunconyiwe, ngoba ukuthatha i-atorvastatin isikhathi eside ngemuva kokuthi i-rifampicin ihlotshaniswe ne-plas ebalulekile. Kodwa-ke, umphumela we-rifampicin ekuhlakazweni kwe-atorvastatin kumaseli wesibindi awaziwa, futhi uma kungenakwenzeka ukugwema ukusetshenziswa ngasikhathi sinye, ukusebenza ngempumelelo kwesiguli kufanele kugadwe ngokucophelela.
Ama-inhibitors amaprotheni ezokuthutha (isb., Cyclosporine) ayakwazi ukuthuthukisa imiphumela ye-atorvastatin. Umphumela wokucindezelwa kwama-veptol we-hepatic ekubanjweni kwe-atorvastatin kumaseli wesibindi awaziwa. Uma kungenakwenzeka ukugwema ukuphathwa kanyekanye kwalezi zidakamizwa, kuncishiswa ukuncishiswa komthamo nokuqapha kokusebenza kahle komtholampilo.
Gemfibrozil / Fibre Acid Derivatives / Ezetimibe
Ukusetshenziswa kwama-fibrate kanye ne-ezetimibe njenge-monotherapy kuhlotshaniswa nokukhula kwezimpawu ezivela ohlelweni lwemisipha, kufaka phakathi i-rhabdomyolysis. Ngokusebenzisa kanyekanye i-ezetimibe noma okuthathwe ku-fibric acid ene-atorvastatin, ubungozi bokukhula kwalezi zinto bungenyuka. Uma kungenakwenzeka ukugwema ukuphathwa kanyekanye kwalezi zidakamizwa, kubalulekile ukusebenzisa umthamo omncane we-atorvastatin ukufeza umgomo wokwelapha, kanye nokuqapha okufanele kweziguli.
I-atorvastatin nama-metabolites ayo asebenzayo ku-plasma yegazi ayephansi (cishe ama-25%) ngenkathi kuthathwa i-atorvastatin nge-colestipol. Ngasikhathi sinye, umphumela we-lipidemic wokuhlanganiswa kwezidakamizwa i-actorvastatin ne-colestipol udlule umphumela onikeza ngamunye wale mithi ngokwahlukana.
Ucwaningo lokusebenzisana kwe-atorvastatin ne-fusidic acid alwenziwa. Kube nemibiko yokusabela okungekuhle kusuka emisipha, kufaka phakathi i-rhabdomyolysis, ngenkathi kuthathwa i-atorvastatin ne-fusidic acid. Ukusebenza kwalokhu kusebenzisana akwaziwa. I-Atorvastatin akufanele iphathwe nge-fusidic acid. Uma kudingekile ukusebenzisa i-systemic fusidic acid, ukwelashwa ngama-statins kufanele kunqatshelwe sonke isikhathi sokwelashwa nge-fusidic acid. Iziguli zelulekwa ukuba zibonane nodokotela ngokushesha uma zithola noma yiziphi izimpawu zobuthakathaka bemisipha, izinhlungu, noma ukuba buhlungu.
Ukwelashwa kwe-Statin kungaqalwa futhi ngemuva kwezinsuku eziyisikhombisa emva komthamo wokugcina we-fusidic acid. Ezimweni ezihlukile, lapho ukuphathwa kokuhleleka kwesikhathi eside kwe-fusidic acid kuyadingeka, ngokwesibonelo, ekwelashweni kwezifo ezinzima, isidingo sokuphathwa okuhlangene kwe-atorvastatin ne-fusidic acid kufanele sibhekwe ngawodwana futhi ukwelashwa kufanele kwenziwe ngaphansi kokuqashwa kwezokwelashwa okuseduze.
Noma kungekho zifundo ezenziwayo ngokuxhumana kwe-atorvastatin ne-colchicine, amacala e-myopathy abikwe ngokusetshenziswa kwe-atorvastatin ne-colchicine, futhi i-atorvastatin ene-colchicine kufanele isetshenziswe ngokuqapha.
Umphumela we-atorvastatin ezidakamizweni ezisetshenzisanayo
Ngokusebenzisa kanyekanye i-10 mg ye-digoxin ne-atorvastatin kumithamo eminingi, ukugxila okulinganayo kwe-digoxin kukhuphuka kancane. Iziguli ezithatha i-digoxin zidinga ukuqashwa okufanele.
Ukusetshenziswa kanyekanye kwe-atorvastatin ngezindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo kufaka isandla ekwandiseni ukugxila kwe-norethindrone ne-ethinyl estradiol.
Lo mphumela kufanele ubhekwe lapho ukhetha isisu somlomo wesibeletho kowesifazane othatha i-atorvastatin.
Yize kubikwa ukuthi kuye kwabikwa kuphela izigameko ezimbalwa zokuxhumana ngokubambisana nama-anticoagulants emitholampilo, ezigulini ezithatha i-coumarin anticoagulants, isikhathi se-prothrombin kufanele sinqunywe ngaphambi kokuqala ukwelashwa nge-atorvastatin futhi kaningi ngokwanele ezigabeni zokuqala zokwelashwa ukuqinisekisa ukuthi azikho izinguquko ezibalulekile ngesikhathi se-prothrombin. Uma isikhathi se-prothrombin esizinzile sesibhalwe phansi, kungaqashwa kumvamisa kakhulu kunconyelwa iziguli ezithola i-coumarin anticoagulants. Inqubo efanayo kufanele iphindwe lapho kuguqulwa umthamo we-atorvastatin noma ukwesulwa kwawo. Ukwelashwa kwe-Atorvastatin bekungahambisana nezimo zokuphuma kwegazi noma izinguquko esikhathini se-prothrombin ezigulini ezingathathi i-anticoagulants.
Ama-antacid aqukethe i-magnesium noma i-aluminium hydroxide
Ngokusetshenziswa kanyekanye kwama-antacid aqukethe i-magnesium noma i-aluminium hydroxide ene-atorvastatin, ukugcwala kokugcina kwe-plasma yegazi kuyehla.
Isenzo semisipha yemithambo
I-Atorvastatin, njengamanye ama-HMG-CoA reductase inhibitors (hydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase), ngezinye izikhathi ingathinta umsipha wamathambo futhi ibangele i-myalgia, i-myositis, kanye ne-myopathy, engathuthukela ku-rhabdomyolysis, isimo esisongela impilo esibonakaliswa ngamazinga akhuphuke kakhulu we-creatine kinase (QC) (> Izikhathi eziyi-10 VPN), i-myoglobinemia ne-myoglobinuria, okungaholela ekwehlulekeni kwe-renal. Umlando wesiguli wokulimazeka kwe-renal ungasebenza futhi njengengxenye yengozi ye-rhabdomyolysis. Ngokusetshenziswa okuhlanganisiwe kwe-atorvastatin enezidakamizwa eziningi, ezinjenge-cyclosporine ne-potency CYP 3A4 inhibitors (i-clearithromycin, intraconazole, i-HIV proteinase inhibitors), ingozi yokwanda kwe-myopathy / rhabdomyolysis iyanda.
Ukwabela Atorvastatin-Teva a lipid-ukwehlisa amazinga okukhishwa lihambisana nemikhiqizo fibric acid, erythromycin, cyclosporin, Teli-tromitsinom, immunosuppressants, inhlanganisela ka-HIV protease inhibitors (saquinavir, ritonavir, lopinavir nge ritonavir, tipranavir, ritonavir, darunavir ne ritonavir, fosamprenavir nge ritonavir) , nge-niacin, umuthi we-aerosol antifungal noma i-nicotinic acid, kanye ne-colchicine, udokotela kufanele ahlole ngokucophelela izinzuzo nezingozi ezilindelekile zalokhu kwelashwa futhi aqaphele njalo izinhlungu s ukuthola ubuhlungu noma ubuthaka imisipha, ikakhulukazi phakathi nezinyanga zokuqala zokwelashwa kanye ngezikhathi okwandisa esenikwe iyiphi ekwakhiweni ngokuqondene ingozi myopathy. Lapho kuhlanganiswa nemithi engenhla, kungenzeka ukuthi kubhekwe imithamo yokuqala yokusebenzisa nokulungisa i-atorvastatin. Ezimweni ezinjalo, ukunqunywa ngezikhathi zomsebenzi we-CPK kunganconywa, yize ukuqaphela okunjalo kungavimbeli ukuthuthukiswa kwe-myopathy enzima.
Iziphakamiso zokuqokwa kwezinto ezisebenzayo zifingqiwe kuthebula elingezansi.
Ukusebenzelana kwezidakamizwa okuhambisana nengozi eyengeziwe ye-myopathy / rhabdomyolysis
I-cyclosporin, i-HIV proteinase inhibitors (i-tipranavir nge-ritonavir), i-hepatitis C virus proteinase inhibitor (telaprevir), fusidic acid
Gwema ukusebenzisa i-atorvastatin
I-HIV proteinase inhibitor (lopinavir nge-ritonavir)
Sebenzisa ngokuqapha nangethamo eliphansi kakhulu elidingakalayo.
I-Clarithromycin, intraconazole, i-HIV proteinase inhibitors (saquinavir ene-ritonavir *, i-darunavir ene-ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir nge-ritonavir)
Ungeqi umthamo we-atorvastatin
I-HIV proteinase inhibitor (nelfinavir), i-virus ye-protein ye-hepatitis C inhibitor (boceprevir)
Ungeqi umthamo we-atorvastatin 40 mg ngosuku
* Sebenzisa ngokuqapha nangethamo eliphansi kakhulu elidingakalayo.
I-Atorvastatin-Teva inqunywa ngokuqwashisa kwiziguli ezinesisungu se-rhabdomyolysis ngokukhula kokuhluleka kwe-renal ngenxa ye-myoglobinuria kanye ne-myoglobinemia (hypothyroidism, ifa le-musculoskeletal hereditary, ukwehluleka kwe-renal, umlando wesifo sesibindi, ukusetshenziswa kwenani elikhulu lobuthi botshwala, ukusetshenziswa kwezicubu zomzimba umlando wama-statins noma ama-fibrate, isiguli singaphezu kweminyaka engama-70 ubudala. Kulokhu, kuyadingeka ukuthi utadishe izinga le-creatine phosphokinase (KFK), futhi uma izinga le-KFK lidlulwa amahlandla ama-5, ukwelashwa akufanele kuqale. Ngesikhathi sokwelashwa, uma kunezikhalazo zobuhlungu bemisipha, ama-cramps, ubuthakathaka, i-malaise nomkhuhlane, kuyadingeka ukuthola izinga le-CPK, futhi uma i-CPK idlulwa amahlandla ama-5, okwesikhashana noma iyeke ngokuphelele ukwelashwa nge-atorvastatin.
Iziguli ezinqunywe i-Atorvastatin-Teva kufanele zixwayiswe ukuthi kufanele zibonane nodokotela ngokushesha uma kwenzeka zingachazeki izinhlungu noma kubuthakathaka bemisipha, ikakhulukazi uma zihambisana malaise noma imfiva.
Ngemuva kokwelashwa nge-atorvastatin, ukwanda okukhulu (okungaphezulu kwezikhathi ezi-3 ngokuqhathaniswa nomkhawulo ophezulu wesimo esijwayelekile) ukwanda komsebenzi we-serum wama-transaminase "wesibindi".
Kuyadingeka ukuqapha izinkomba zomsebenzi wesibindi phakathi nayo yonke inkambo yokwelashwa, ikakhulukazi ngokubukeka kwezimpawu zomtholampilo zokulimala kwesibindi. Endabeni yokwanda kokuqukethwe kwama-hepatic transaminases, umsebenzi wabo kufanele ubhekwe kuze kufike lapho kufinyelelwa khona umkhawulo wesimo esijwayelekile. Uma ukwanda komsebenzi we-AST noma i-ALT kungaphezulu kwezikhathi ezi-3 uma kuqhathaniswa nomkhawulo ophezulu wesimo esivamile kugcinwa, kunconyelwa ukuthi umthamo wehliswe noma ukhanselwe.
Iziguli ezithatha i-Atorvastatin-Teva kufanele zenqabe ukuphuza utshwala. Sebenzisa ngokuqapha ezigulini ezisebenzisa kabi utshwala kanye / noma ezinenkinga yesifo sesibindi (umlando).
Ukuvimbela Ukushaywa Unhlangothi Ngokunciphisa i-Aggressive Cholesterol Reduction (SPARCL) / Hemorrhagic Stroke
Ezigulini ezinomlando wokushayeka kwe-hemorrhagic noma i-lacunar infarction, ibhalansi yesilinganiso / ingozi yesilinganiso se-atorvastatin ngethamo lika-80 mg ayinqunywa, ngakho-ke, ukusetshenziswa kwe-Atorvastatin-Teva kulezi ziguli kungenzeka kuphela ngemuva kokunquma isilinganiso sengozi / inzuzo, cabanga ngengozi engaba khona yokuhlaselwa yi-hemorrhagic stroke njalo.
I-Immuno-Mediated Necrotic Myopathy (IONM)
Ezimweni ezingandile kakhulu, ngesikhathi noma ngemuva kokwelashwa ngezinhlobo ezithile zama-statins, kuye kwabikwa ukuthi i-immuno-Mediated necrotic myopathy (IONM) ibikiwe. I-IONM yomtholampilo ibonakala ngokuqina kokuqina kwemisipha eqhubekayo kanye namazinga e-serum e-kinine kinase akhulayo, aphikelelayo ngisho nangemva kokuba ukwelashwa ngama-statins kunqanyuliwe. Ezimweni lapho ukwelashwa nge-atorvastatin kudinga ukwelashwa okufanayo kanye nale mishanguzo, kuyadingeka ukutadisha ngokucophelela isilinganiso sobungozi / inzuzo yezinzuzo zokwelashwa okuhlangene.
Isifo samaphaphu esijwayelekile
Amacala angavamile wesifo samaphaphu sangaphakathi kuye kwabikwa nawo ngama-statin athile, ikakhulukazi ngesikhathi sokwelashwa isikhathi eside. Uma ngesikhathi sokwelashwa kunezimpawu zokukhula kwesifo se-interstitial pulmonary sifo (ukuphefumula, ukukhwehlela okungenakuzala, ukukhathala, ukuncipha kwesisindo, umkhuhlane), ukwelashwa kwe-statin kufanele kuqedwe.
Izimo zikhulisa ushukela wegazi, kanti kwezinye iziguli ezisengozini enkulu yokuba nesifo sikashukela ngokuzayo, kungaholela ku-hyperglycemia, lapho kuchazwa ukuthi kuqala ukwelashwa kwesifo sikashukela. Kodwa-ke, le ngcuphe idlula izinzuzo zokunciphisa ubungozi emithanjeni yegazi ngama-statins, futhi ngenxa yalokho akufanele kube yisizathu sokumisa ukwelashwa kwe-statin. Iziguli ezisengcupheni (ushukela osheshayo we-5.6-6.9 mmol / L, BMI> 30 kg / m2, ama-triglycerides aphezulu, umfutho wegazi ophezulu) ukuthatha ama-statins kufanele kube ngaphansi kokuqashelwa kwemitholampilo nangokwamakhemikhali.
Ukusetshenziswa kanyekanye kwe-atorvastatin ne-fusidic acid akunconywa, ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ucabangele ukuthi kungenzeka ukuthi ukunqanyulwa kwesikhashana kwe-atorvastatin ngesikhathi sokwelapha nge-fusidic acid.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi lapho uthatha i-Atorvastatin-Teva ngejusi yamagilebhisi, ukugcwala kwe-atorvastatin ku-plasma kuyanda kanye nengozi yemiphumela emibi ikhula.
Ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-18 ubudala, ukusebenza kahle nokuphepha akuzange kusungulwe ngenxa yolwazi olulinganiselwe ekusebenziseni.
Izici zomphumela wesidakamizwa kwikhono lokushayela imoto noma izindlela ezingaba yingozi
Njengoba kunikezwe imiphumela emibi yomuthi, kufanele kuqashelwe lapho ushayela imoto nezinye izindlela ezingaba yingozi.
Khipha ifomu nokufakwa
Amathebhulethi ayi-10 kwiphakethe lokuqhuma i-Alu / Alu, equkethe ifilimu ye-polyvinyl chloride noma i-polyvinylidene chloride ne-varnished aluminium foil kanye nefilimu le-polyvinyl chloride polyamide ne-aluminium foil.
Amaphakethe ama-3 we-contour cell kanye nemiyalo yokusetshenziswa kwezokwelapha esifundeni nezilimi zaseRussia zifakwa kwiphakethe lekhadibhodi.
Umuthi we-Atorvastatin-Teva: imiyalo, ukuphikisana, i-analogues
I-Atorvastatin-Teva isidakamizwa i-hypolipidemic. Indlela yokusebenza yezidakamizwa ezokwehlisa i-lipid ukunciphisa izinga le-cholesterol "embi", kanye nenani lama-triglycerides nama-lipoprotein asezingeni eliphansi nelincane kakhulu. Futhi, bandisa ukugcwala kwama-lipoprotein aphezulu kwabantu kanye ne-cholesterol "enhle".
I-Atorvastatin-Teva iyatholakala ngesimo samathebhulethi amhlophe aqoshwe ngefilimu. Kuqoshwe imibhalo emibili ebusweni bawo, omunye wawo ngu- "93", kanti owesibili uncike kwimithamo yomuthi. Uma umthamo ungu-10 mg, kuqoshwe u-"7310", uma ngabe ngu-20 mg, bese "7311", uma 30 mg, bese "7312", uma u-40 mg, bese "7313".
Isithako esikhulu esisebenzayo se-Atorvastatin-Teva yi-atorvastatin calcium. Futhi, ukwakheka kwalo muthi kufaka izinto eziningi ezengeziwe ezengeziwe. Lokhu kufaka, ngokwesibonelo, i-lactose monohydrate, i-titanium dioxide, i-polysorbate, i-povidone, i-alpha-tocopherol.
Indlela yokusebenza ye-Atorvastatin-Teva
I-Atorvastatin-Teva, njengoba sekushiwo ekuqaleni, umenzeli ongehlisa i-lipid. Wonke amandla akhe ahlose ukuvimbela, okungukuthi, ukuvimbela isenzo se-enzyme ngaphansi kwegama le-HMG-CoA reductase.
Indima eyinhloko yalesi enzyme ukulawula ukwakheka kwe-cholesterol, ngoba ukwakheka kwangaphambi kwayo, i-mevalonate, kusuka ku-3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A. Kuqala ukwenzeka. I-cholesterol ehlanganisiwe, kanye ne-triglycerides, ithunyelwa esibindini, lapho ihlangana khona ne-lipoproteins ephansi kakhulu. . I-eyakhekile eyedlule idlulela kuyi-plasma yegazi, bese-ke ngesimo sakhona idluliselwa kwezinye izitho nezicubu.
Ama-lipoprotein aphansi kakhulu aguqulwa abe ama-lipoprotein aphansi kakhulu ngokuxhumana nama-receptors awo athile. Njengomphumela walokhu kuhlangana, i-catabolism yabo, isb., Ukubola, kwenzeka.
Umuthi wehlisa inani le-cholesterol ne-lipoprotein egazini leziguli, uvimbela umphumela we-enzyme futhi ukhuphula inani lama-receptors esibindini ama-lipoprotein aphansi. Lokhu kunomthelela ekubanjweni nasekulahlelweni kwabo okukhulu. Inqubo yokuhlanganiswa kwama-lipoprotein e-atherogenic nayo incishiswa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukuqoqwa kwe-cholesterol ephezulu kwe-density lipoprotein cholesterol kuyanda futhi ama-triglycerides ancipha kanye ne-apolipoprotein B (amaprotheni othwala).
Ukusetshenziswa kwe-Atorvstatin-Teva kukhombisa imiphumela ephezulu ekwelashweni kwe-atherossteosis hhayi kuphela, kepha nezinye izifo ezihambisana nomzimba we-lipid, lapho okunye ukwelashwa kwe-lipid-ukwehlisa kwakungasebenzi.
Kusungulwe ukuthi ubungozi bokuthola izifo ezihambisana nenhliziyo nemithambo yegazi, njengokuhlaselwa yisifo senhliziyo nemivimbo, kuncishiswa kakhulu.
Lesi sidakamizwa sidonswa ngokushesha. Isikhathi esingamahora amabili, ukugcotshwa okuphezulu kakhulu kwezidakamizwa kubhalwe egazini lesiguli. I-Absorption, okungukuthi, ukumuncwa, kungashintsha ijubane layo.
Isibonelo, inganciphisa ngenkathi uthatha amaphilisi ngokudla. Kepha uma ukumuncwa ngale ndlela kuncipha, khona-ke akuwuthinti umphumela we-Atorvastatin uqobo - cholesterol iyaqhubeka incipha ngokuya ngomthamo. Uma ungena emzimbeni, isidakamizwa siba nezinguquko ezi-presystemic ephepheni lesisu. Iboshwe kakhulu amaprotheni e-plasma - 98%.
Izinguquko ezinkulu ze-metabolic ne-Atorvastatin-Teva zenzeka esibindini ngenxa yokuchayeka kuma-isoenzymes. Njengomphumela walomphumela, kwakhiwa ama-metabolites asebenzayo, anecala lokuvinjwa kokunciphisa kwe-HMG-CoA. Ama-70% ayo yonke imiphumela yesidakamizwa yenzeka ngokungenxa yalawa ma-metabolites.
I-Atorvastatin ikhishwa emzimbeni nge-hepatic bile. Isikhathi lapho ukuhlangana komuthi egazini kuzolingana nohhafu wangempela (okubizwa ngokuthi yingxenye yempilo) kungamahora ayi-14. Umphumela we-enzyme uhlala cishe usuku. Akukho ngaphezu kwamaphesenti amabili esamba esamukelekile esinganqunywa ngokuhlola umchamo wesiguli. Ezigulini ezinokwehluleka kwe-renal, kufanele kukhunjulwe ukuthi ngesikhathi se-hemodialysis, i-Atorvastatin ayishiyi emzimbeni.
Inani eliphakeme lomuthi lidlula okujwayelekile ngabesifazane ngama-20%, futhi izinga lokuqedwa kwalo lehliswa ngo-10%.
Ezigulini ezinokulimala kwesibindi ngenxa yokusebenzisa kabi utshwala ngokungapheli, inani eliphakeme likhuphuka ngezikhathi eziyi-16, futhi isilinganiso se-excretion sehla ngezikhathi eziyi-11, ngokungafani nokwejwayelekile.
Izinkomba kanye ne-contraindication ukuze zisetshenziswe
I-Atorvastatin-Teva umuthi osetshenziswa kabanzi kwezokwelapha zesimanje.
Ukwelashwa kwanoma yiziphi zalezi zifo ezingenhla kanye ne-pathologies kwenziwa ngenkathi kubhekwa ukudla okusiza ukwehlisa i-cholesterol yegazi (okuphezulu kwimifino entsha nezithelo, izinsalela, amakhambi, amajikijolo, ukudla kwasolwandle, izinkukhu, amaqanda), kanye nalapho kungekho khona imiphumela evela ekuqaleni ukwelashwa okusetshenzisiwe.
Kunezinkomba ezimbalwa zokukhombisa ukuthi aphumelela impela:
isifo sokuqina kwemizwa
i-heterozygous yomndeni kanye ne-non-womndeni
uhlobo lokuxubile hypercholesterolemia (uhlobo lwesibili ngokusho kukaFredrickson),
i-triglycerides ephakeme (uhlobo lwesine ngokusho kukaFredrickson),
ukungalingani kwama-lipoproteins (uhlobo lwesithathu ngokukaFredrickson),
homozygous womndeni hypercholesterolemia.
Kukhona futhi ukuphikisana okuningi kusetshenziswa kwe-Atorvastatin-Teva:
Izifo zesibindi esigabeni esisebenzayo noma esigabeni sokuqhuma.
Ukwanda kwezinga lamasampula e-hepatic (ALT - alanine aminotransferase, AST - aspartate aminotransferase) kungaphezu kwezikhathi ezintathu, ngaphandle kwezizathu ezicacile,
Izingane zeminyaka encane.
Ukubonakaliswa kwe-allergic lapho uthatha noma yiziphi izakhi zomuthi.
Kwezinye izimo, la maphilisi kufanele abekwe ngokuqapha ngokweqile. Lezi yizimo ezifana:
ukuphuza ngokweqile utshwala,
izilonda ezithathelanayo ezihlasela kakhulu
isifo sokuwa esingalashwa
ukusebenza okuningi nokulimala okulimazayo,
Ngaphezu kwalokho, ukuqaphela lapho uthatha umuthi kufanele uvivinyeke lapho ukhona ama-pathologies wesistimu yemisipha.
I-Atorvastatin-Teva igcwele ukuthuthukiswa kwe-myopathy - ubuthakathaka obunzima bemisipha, njengazo zonke izidakamizwa ezikuqembu le-HMG-CoA reductase inhibitors. Ngokusetshenziswa okuhlangene kwezidakamizwa eziningana, ubungozi bokuthuthukisa le-pathology bunganda kakhulu. Lezi izidakamizwa ezinjenge-fibrate (elinye lamaqembu e-pharmacological ant antlelesterolemic), ama-antibiotics (erythromycin kanye nama-macrolides), izidakamizwa ze-antifungal, amavithamini (PP, noma i-nicotinic acid).
Lawa maqembu enza i-enzyme ekhethekile ebizwa nge-CYP3A4, edlala indima enkulu ku-Atorvastatin-Teva metabolism. Ngalesi hlobo lokwelashwa okuhlanganisa, izinga le-atorvastatin esegazini lingakhuphuka ngenxa yokuvinjwa kwe-enzyme esesikhulume ngayo ngaphambili, ngoba umuthi awukhiqizwanga kahle. Izidakamizwa eziseqoqweni le-fibrate, ngokwesibonelo, i-Fenofibrate, zivimbela izinqubo zokuguqulwa kwe-Atorvastatin-Teva, ngenxa yalokho inani layo egazini libuye likhuphuke.
I-Atorvastatin-Teva nayo ingaholela ekwakhiweni kwe-rhabdomyolysis - lokhu kuyindlela ebaluleke kakhulu eyenzeka njengomphumela wesifundo eside se-myopathy. Kule nqubo, imicu yemisipha iba nokubhujiswa okukhulu, ukwabiwa kwawo umchamo kuyabonakala, okungaholela ekwehlulekeni kwe-renal acute. I-Rhabdomyolysis ivame ukukhula ngokusetshenziswa kwe-Atorvastatin-Teva kanye namaqembu wezidakamizwa angenhla.
Uma unquma umuthi endaweni ephezulu evunyelwe umthamo wansuku zonke (80 mg ngosuku) kanye ne-cardiac glycoside Digoxin, khona-ke kukhona ukwanda kokuhlushwa kwe-Digoxin cishe ingxenye eyodwa kwezihlanu komthamo othathwe.
Kubaluleke kakhulu ukuhlanganisa ukusetshenziswa kwe-Atorvastatin-Teva nezidakamizwa zokulawula ukuzala eziqukethe i-estrogen kanye nokuphuma kwayo, ngoba kunokwenyuka kwezinga lamahomoni abesifazane. Kunendaba nabesifazane beminyaka yokuzala.
Ngokudla, kunconywa ngokucophelela ukunciphisa ukusetshenziswa kwejusi yamagilebhisi, ngoba kuqukethe izinto ezingaphezu kwesisodwa ezivimbela i-enzyme, ngaphansi kwethonya lapho izinqubo eziyinhloko ze-metabolic ze-Atorvastatin-Teva zenzeka khona kanye nezinga lazo egazini likhuphuka. Lesi sidakamizwa singathengwa kunoma yiliphi ikhemisi ngencwadi ebhalwe phansi.
Imininingwane ngezidakamizwa i-Atorvastatin inikezwe kuvidiyo ekulesi sihloko.